6. Yintoni umahluko phakathi koqoqosho oluqhelekileyo, Intlawulo yanyanga le, Ishishini kunye noLawulo kwiTrenitalia 7. Ngaba kukho ubhaliso lweTrenitalia
in 2005, i Utolo Olubomvu 1000, Umzila kaloliwe okhawulezayo weTrenitalia wamiselwa. Isantya iFrecciarossa 1000 ifikelela kwi-300km ngeyure.
Indlela ephambili yoololiwe bamanye amazwe iphakathi kweGeneva neMilan kwaye iyathatha 4 iiyure ezikwiTrenitalia.
Inkonzo yoololiwe iTrenitalia ifuna kakhulu. Itikiti likaloliwe laseTrenitalia Base linokutshintshiselana kwaye liguqulwe ngaphandle komda kwaye itikiti loQoqosho oluMgangatho linokulungiswa kube kanye ngaphambi komhla wokuhamba koololiwe. Awunakho ukutshintshiselana okanye ukubuyisela imali kwamanye amatikiti eTrenitalia, kodwa kukho iiforamu kwi-intanethi onokuzithengisa itikiti lakho laseTrenitalia. Gcina isindululo soQeqesha Ukuhamba ngeTrenitalia Kukubhuka xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yokuhamba.
Intlawulo yanyanga le 42 € – 90 € 78 € – 172 €
Ishishini 47 € – 97 € 90 € – 190 €
1) Uncedo loololiwe baseTrenitalia luqala ngento yokuba ungahamba kwaye ufike ngqo kumbindi wesixeko kuso nasiphi na isixeko ohamba kuso. ngokuqinisekileyo, Le nto yahluke kakhulu kuloliwe, ingakumbi ukuba uqeqesha uhambo ukusuka eRoma, milan, Florence, eGeneva, okanye iMonaco, sisibonelelo esikhulu kuTrenitalia. Ngenxa yohambo oluthe ngqo kwiziko lesixeko, uyakuphepha ukugcwala kwiitrafikhi kwaye akukho nto imbi ngakumbi kunokunamathela kwitrafikhi ekhefini.
Yintoni umahluko phakathi koqoqosho oluqhelekileyo, Intlawulo yanyanga le, Ishishini, kunye noLawulo kwiTrenitalia?
Umahluko ophambili phakathi kweeklasi zamatikiti eTrenitalia lukaloliwe kukungatshintshi kohlengahlengiso lweetikiti, amaxabiso, kunye neenkonzo. Ngaphezu, itikiti loqeqesho ngololiwe oluqhelekileyo yeyona ndlela inexabiso eliphantsi kwaye ibhetyebhetye yokuhamba e-Itali.
I-Trenitalia Itikiti lesitimela loqoqosho oluqhelekileyo yeyona nto inexabiso eliphantsi kuyo yonke imali yeTrenitalia. Kungcono ukubhukisha eli tikiti kuloliwe kwangaphambili kuba amatikiti esiseko ngamaxabiso aphantsi – bathengisa ngokukhawuleza. Abahambi abaphethe ithikithi yemigangatho yoLoliwe banokuthatha iisutikheyisi ezifanelekileyo kwisithuba semithwalo, simahla kwaye banokulirhoxisa itikiti labo kuloliwe ngaphambi kokuba bemke kwaye bafumana ukubuyiselwa imali ngokuyinxenye (intlawulo yokuncitshiswa 20%).
Ukongeza kwizibonelelo zetikiti elililo eliqhelekileyo, Amatikiti ePrimiyamu oQoqosho lweTrenitalia anikezela ngezihlalo ezimnandi ezinamagumbi emilenze amaninzi kunye nezihlalo ezingqengqile kuhambo olude. Ngaphezu koko, Kukho iimenyu ezintathu zokutya onokukhetha kuzo kunye nokutya okukhanya kunye neziselo ziya kuthunyelwa esihlalweni sakho phezu koololiwe baseTrenitalia.
the Itikiti lokushishina ngeTrenitalia abathengi banokonwabela zonke izibonelelo esizibhalileyo ngasentla kodwa, abakhweli beNkulumbuso yeShishini laseTrenitalia bayazuza kwiingxowa ezininzi zemithwalo, izihlalo zesikhumba ezifanelekileyo ze-ergonomic, igumbi elandisiweyo, Iimenyu ezintathu zokutya onokukhetha kuzo. Ngaphezu, uneendonga zobumfihlo kunye nendawo ethe cwaka kwiindawo zoShishino ezichongiweyo koololiwe baseTrenitalia.
Kukho iPasi yokuya e-Itali, kodwa icetyiswa kuphela njengenketho yexabiso eliphantsi ukuba ucwangcisa ukuqeqesha ukuhamba ngaphezulu 14 iintsuku, ubhaliso luvumela ukuhlola i-Itali ngoololiwe ngohambiso olukhethekileyo. Nazi 3 amanqanaba okuphumelela: Kulula, Intuthuzelo, kunye noLawulo kwaye unokukhetha inani leehambo ezisuka 3 ukuba 10 kunye nokukhetha uhlobo loololiwe ukusuka kwisantya esiphezulu kwiFrecce ukuya kunxibelelwano kunye ne-EuroCity.
I-Trenitalia igubungela yonke i-Italiya, kunjalo, Izikhululo zikazwelonke eziphambili ziyiMilan, eRoma, eVenice, Naples, eTurin, eBologna, eGeneva, Florence, no Verona. Nazi 11 Izikhululo zamazwe aphesheya: 5 Izikhululo zikaloliwe zaseTrenitalia eSwitzerland kunye 6 Izikhululo eFrance kunye ezimbalwa e-Austria naseJamani nase-Croatia. Ke kuyacaca ukuba ungahamba kakuhle kwaye ukhawuleze uhambe ngeYurophu entle kwaye uthande imibono yase-Italiya ngaphandle kokuphosa nto!
Isikhululo sikaloliwe saseFlorence, USanta Maria Novella, kukuhamba nje okufutshane ukusuka eDuomo kunye nomtsalane omkhulu kwidolophu yakudala yaseFlorence. Isikhululo sibizwe emva kwecawa yaseSanta Maria Novella ngaphaya komnyango wayo. ke, ungabba ngokulula amaxeshana aliqela amahle kwidolophu yakudala, ngaphambi kokuba uqhubeke kwi uhambo olulandelayo e-Itali.
I-Naples terminal Ngasempuma kweDolophu yakudala. Ukuba ucwangcisa ukwenza ezinye uhambo losuku oluvela eNaples ukuya ePompeii okanye eSorrento, ke ngokuqinisekileyo uya kuma kwisikhululo sikaloliwe saseNaples kuhambo lwakho lukaloliwe.
Okubaluleke ngokulinganayo kukuzizisa kuhambo lweTrenitalia kubalulekile. Ngaphezulu kwayo qiniseka ukuba noxwebhu lwakho lokuhamba lwaseTrenitalia kwifowuni yakho okanye eprintiweyo kwaye incwadana yokundwendwela esemthethweni kufuneka ubenayo kwaye kusoloko kulungile ukuba ne-inshurensi yokuhamba.
I-Trenitalia FAQ ndingaya phi neTrenitalia?
Oololiwe beTrenitalia banesitayile se-cafe-bar esimiselweyo esenzelwe iziselo kunye nokutya okukhanyayo. Imenyu ibandakanya iisandwich, Iitshokholethi itshokolethi, okulula, imivalo yetshokholethi, kofu, Itshokolethi eshushu, kunye neti kwaye ungatya kwaye usele kule venkile yokutya kaloliwe okanye uthathe into oyithengileyo kwisitulo sakho. Ukuba uhamba ngeShishini, Intlawulo yanyanga le, okanye kwiklasi yokuqala unokukhetha isiselo simahla sokwamkelwa kukhetho lwe 9 iziselo ezikhoyo kunye neswiti, okunencasa, okanye i-gluten-free snack. Kuzo zonke izitimela zeTrenitalia, kukho iindawo ezitsala umbane ecaleni kwesihlalo sakho.
Ukuququmbela, ukuba ufikelele kule ndawo, Uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga noololiwe baseTrenitalia kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho loLoliwe iTrenitalia GcinaATrain.com.
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.